मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका दुई जना उप-प्राध्यापक बर्खास्तमा परेका छन् । परीक्षामा विद्यार्थीलाई आफूखुसी नम्बर दिएको र परीक्षा अगावै विद्यार्थीलाई प्रश्नपत्र उपलब्ध गराएकाे आरोपमा इञ्जिनियरिङ संकाय स्नातकोत्तर कार्यक्रमका निर्देशक उप-प्राध्यापक विश्वनाथ यादव र कानुन संकायका उप-प्राध्यापक सुजन पन्तलाई बर्खास्त गरिएको हो ।
यादवलाई आफूखुसी विद्यार्थीलाई नम्बर दिएको र पन्तलाई प्रश्नपत्र ‘आउट’ गरेको आरोप छ ।
आर्थिक प्रलोभनमा परी परीक्षामा सामेल नै नभएका विद्यार्थीलाई आफूखुसी नम्बर दिएर पास गराएको निष्कर्ष विश्वविद्यालयले निकालेको छ । विश्वविद्यालयमा यादव स्थायी हुन् भने पन्त करार सेवामा कार्यरत थिए । अक्षम्य शैक्षिक अपराध गरेकाले उनीहरूलाई बर्खास्त गरिएको विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. नन्दबहादुर सिंहले बताए ।
विश्वविद्यालयले उप-प्राध्यापक पन्तलाई यस अघि नै ३ महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो । स्ट्रकचरल इञ्जिनियरिङ विषयको अन्तिम सत्रको प्रयोगात्मक परीक्षामा उपप्राध्यापकले आफूखुसी नम्बर दिएको पाइएको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रकाशित मिति : असार २२, २०७८ मंगलबार १३:५१:१५, अन्तिम अपडेट : असार २२, २०७८ मंगलबार १३:५१:२७